Mankalaza Ny Famotsorana Ireo Ankizivavy Chibok 82 Nobaboin’ny Boko Haram Ny Nizeriana · Global Voices teny Malagasy
Nilaza ny governemanta fa nitera-bokatra ny fifampiraharahana tamin'ny milisy.
Voadika ny 09 Mey 2017 19:56 GMT
Nankalaza ny famotsorana ireo tovovavy 82, teo am-pelatanan'ny milisy Boko Haram tamin'ny Asabotsy 6 May 2017 ny Nizeriana. Nivoaka lohateny manerantany ny fakàna an-keriny an'ireo tovovavy avy ao Chibok tanàna avaratra-atsinanana ireo tamin'ny taona 2014, ary natsangana ny tenirohy #BringBackOurGirls izay nanakoako teo amin'ireo olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao, ka anisan'ny nanao izany ny Vadin'ny filohan'i Etazonia teo aloha, Michelle Obama.
Navotsotra ireo ankizivavy ireo taorian'ny fifampiraharahana teo amin'ny governemanta sy ny Boko Haram, ka ny famotsorana ireo mpikambana tao amin'ny vondrona nogadrain'ny manampahefana Nizeriana no takalon'izany, araka ny fanambarana avy amin'ny Biraon'ny Filoha.
Tamin'ny Aprily 2014, nalain'ny Boko Haram an-keriny ireo ankizivavy mpianatra miisa 276 avy amin'ny sekolim-panjakana ambaratonga faharoa ao Chibok, ny Boko Haram dia vondrona nanatontosa hetsika mahery setra tamin'ny governemanta Nizeriana nandritra ny fito taona, izay nitarika fahafatesana an'arivony sy famindran-toerana olona miisa roa tapitrisa. Nandritra izany fotoana izany, afaka nitsoaka ny 57 tamin'ireo ankizy nalain'ny milisy ankeriny. Tamin'ny volana Oktobra, navotsotra ny 21. Na izany aza, taorian'ny famoahana ity andiany farany ity, mbola misy ankizivavy 113 tsy hita, araka ny fahafantarana azy.
Tsy ny feo iraisam-pirenena ihany no feo tokana nitondra fanentanana manerantany manoloana ny fakàna an-keriny. Fa tao koa ireo mpikatroka ao an-toerana, tahaka ny Dr. Obiageli “Oby” Ezekwesili sy ny hafa, izay nitarika fihetsiketsehana hatrany am-boalohany, ka “nitaky fandraisana andraikitra haingana avy amin'ny governemanta mba hamotsorana ireo ankizivavy mpianatra ireo“. Ankehitriny, nisy vokany ihany ny hetsik'izy ireo.
Tamin'ny Asabotsy, nilaza ny fanambarana ofisialy avy amin'ny governemanta fa “nitera-bokatra” ny fifanarahana tamin'ny Boko Haram:
Nandray anjara ho mpanelanelana tamin'ny fifampiraharahana ny Komitin'ny Vokovoko Mena Iraisampirenena:
Mandray anjara ho mpanelanelana tsy mitanila, nitondra ireo #ChibokGirls 82 tany amin'ny governemantan'i #Nigeria izahay @ICRC
MIFALY ISIKA & MIDERA NY TOMPO miaraka amin'ny Ray aman-dRenin'izy ireo! FG,????
Midera ny faharetana sy ny fahavitrihan'ny @BBOG_Nigeria notarihan'ny @obyezeks aho. Raha tsy teo izy ireo, mety adino ireo ankizivavy #ChibokGirls
Avy amin'ilay ankizivavy 15 taona Aliyyah ny tena hafatra fiarahabana mahafana fo. Ahoana no ahafahako hijanona [tsy hitaky] ny #ChibokGirls? Ahoana?
Miady amin'ny hafahafa rehetra, navotsotra ireo 82 #ChibokGirls – gaga aho!
Na dia eo aza ny vaovao tsara, tsy taitra tamin'ny hetsiky ny governemanta nifandimby mikasika ny fepetra manoloana ny zava-nitranga ny sasany tao amin'ny media sosialy. Ikhide, mpahay haisoratra mpitsikera, niampanga ny “tsy fisian'ny mangaraharana tamin'ny dingana rehetra” tao amin'ny Facebook:
Ny zavatra resahin'i Ikhide dia mety ho ilay zava-nitranga tamin'ny famotsorana ny andiany tamin'ny volana Oktobra, izay nogaidrain'ny governemanta tany am-boalohany. Tamin'izany fotoana izany, nilaza ny minisitra iray fa noho ireo “ekipa dokotera, psikology, mpiasa ara-tsosialy, manam-pahaizana momba ny ratram-po” handeha hizaha azy ireo no anton'izany. “Indrindra indrindra satria efa nogadraina fotoana ela izy ireo,” hoy ny minisitra. “Mifandray amin'ny ray aman-drenin'izy ireo izahay ankehitriny izay tafiditra ao anatin'ny asa fanamarinana nilaina.”
Tamin'ny volana Desambra, na izany aza, tafaray tamin'ny fianakaviany tamin'ny Krismasy izy ireo. Nisy ny tatitra nilaza fa “notazonina tany an-tranon'ny mpanao politika iray ny sasany tamin'ireo ankizivavy, ary tsy navela hivoaka ny trano,” araka ny tatitry ny BBC. Na izany aza, niverina an-tsekoly izy ireo tamin'ny volana Janoary mba “hanala fanadinana fifindra-kilasy.
Mikasika ireo ankizivavy navotsotra farany indrindra kosa, nandrisika ny governemanta Nizeriana mba hanaja ny fiainan'izy ireo manokana ny Amnesty International . Osai Ojigho, talen'ny firenena Amnesty International ao Nizeria, nilaza hoe: